Mogadishu Journal » Arsenal oo guul weyn ka gaartay Ac Milan ciyaar ka dhacday San Siro
Laba gool oo ay kala dhaliyeen Henrikh Mkhitaryan iyo Aaron Ramsey ayaa guul weyn siisay Arsenal iyadoo marti ah kulan ka tirsan UEFA Europa League, waana kulanka lugta hore wareega 16-ka.
Milan waxey sameysay bilowgii kulanka fur-furnaan badan iyo firfircooni dheeraad ah, balse marnaba ma helin iney haliso badan galiso goolka Arsenal, tiiyoo ay jirto in Gunners ay dib kala soo qabsatay kulanka.
Henrikh Mkhitaryan ayaa bilaabay bandhigga goolasha kadib markii uu kubad ku garacay Leonardo Bonucci, goolhaye Donnaruma ayaana awoodi waayay inuu badbaadiyo.
Arsenal haliso badan ayey abuurtay iyadoo Welbeck uu isku day fiican sameeyay balse uma suuragalin.
Aaron Ramsey ayaa dhaliyay gool qurux badan oo caaqibo leh, Ozil ayaa aawiyay, si fiican ayuu goolhayaha ugu gooyay ka hor inta uusan shabaqa oo furan shab ku siin.
Qeybta hore ciyaarta waxaa lagu kala baxay 2-0, oo ay ku hogaamineyso Arsenal, balse qeybtii labaad wax isbadal ah sooma kordhin.
Ac Milan waxey sameeyeen dadaalo badan oo ay gool ku dooneen, balse uma suuragalin iney gool helaan.
natiijada waxey ku dhamaatay 0-2, oo ay guusha ku raacday Arsenal waxeyna u tahay faa’iido weyn maadama ay banaanka kusoo dhalisay goolal.
Borussia Dortmund 1 – 2 Salzburg
CSKA Moscow 0 – 1 Lyon